Amabali oosomashishini. IGeopois.com -Geofumadas
Ikhaya/Iiphotography/Amabali oosomashishini. Yenyani.com
IiphotographyUkufundisa i-CAD / GISGeospatial - GIS
Kolu hlelo lwe-6 Iphephancwadi iTwingeo Sivula icandelo elinikezelwe kushishino, ngeli xesha yayilixesha likaJavier Gabás Jiménez, athe uGeofumadas wanxibelelana naye ngamanye amaxesha ngeenkonzo kunye namathuba anikezelwa kuluntu lwe-GEO.
Ngombulelo wenkxaso kunye nokuqhutywa luluntu lwe-GEO, sikwazile ukuyila isicwangciso seshishini lethu kwaye safikelela kwisigaba sokugqibela sokhuphiswano lwe-ActúaUPM, nangona singakhange sifumane bhaso lemali, saqhubeka nezinto zethu.
Inqaku elithi "Amabali oShishino: iGeopois.com" labhalwa nguJavier ngokwakhe, apho wagqabaza ngenxalenye yeziqalo zenkampani yakhe de wadityaniswa kwiGeopois.com. Siyakhumbula ukuba iGeopois yiThematic Social Network kwiGeographic Information Technologies (TIG), iinkqubo zolwazi lwejografi (GIS), iinkqubo kunye neMephu yeWebhu ”.
Sifuna ukusuka kwezinye izinto ezenziwa ziinkampani zoqeqesho, ukuguqula i-geopois.com ukuba ibe ngumnatha wonxibelelwano we-GEO, ngakumbi kwiinkqubo ze-geospatial kunye neelayibrari, ezinomxholo othile kunye nonxibelelwano olusondeleyo phakathi koluntu lwethu.
Ukusukela nge2018, uGabás uphawula ngendlela aqale ngayo ukuphuhlisa umbono we "blog yeetekhnoloji ye-geospatial" emva kokugqiba izifundo zakhe zobunjineli kwi-geomatics kunye ne-topography kwiPolytechnic University yaseMadrid kunye nokusebenza kwi-Startups nakwi-Multinationals.
Ubungakanani bemakethi ye-analytics ye-global geospatial kulindeleke ukuba ikhule ukusuka kwi-52,6 yezigidigidi ngo-2020 ukuya kwi-96,3 yezigidigidi ngo-2025, ke imfuno yeengcali ze-geospatial icwangciselwe ukuba iphindwe kabini.
Ngoqeqesho olubanzi lobuchwephesha, uJavier wayenezifundo ezi-5 ezamnika isidanga kwaye, ngaphezulu kwako konke, ulwazi kubuchwephesha bokulawulwa kwedatha njengenkqubo, i-SQL, i-SQL, iiNkqubo zoLwazi lweJografi (GIS) ezamnceda ukuba abe nesiseko sokwenza IGeopois.
Oko sikunika abasebenzisi bethu kukukwazi ukuthatha inxaxheba ngokwenza ii-tutorials ngokusebenzisa imodeli yokufumana abantu abaninzi, indlela i-OpenStreetMap eyenzayo, umzekelo. Siyawukhathalela umxholo, kwaye siyathanda ukukhathalela kunye nokubonelela abasebenzisi bethu ngokubonakala okuphezulu kunye nokuthoba ababhali bethu kunye nokubanika iwebhusayithi enobuchule apho banokuchaza khona.
Yahlulwe yiminyaka, ibonisa iinzame zawo onke amalungu eGeopois ukukhulisa le nkampani ihlala ibonelela ngamathuba kubo bonke abahlalutyi nakwabo banomdla kwidatha ye-geospatial. Iwebhu ibonelela ngeendlela ezizezinye zokufunda kunye nenethiwekhi yabasebenzisana abanokuqhagamshelana nemisebenzi ethile enxulumene nelizwe le-GEO.
Siwuvalile unyaka ngokukhula okubonakalayo ngokwenani lotyelelo, ngaphezulu kwama-50 eetutorials ezikhethekileyo kubuchwephesha be-geospatial, indawo ekhulayo ye-LinkedIn enabalandeli abamalunga ne-3000 kunye nabaphuhlisi be-geospatial abangaphezulu kwama-300 ababhaliswe kwiqonga lethu abavela kumazwe ayi-15, kubandakanya iSpain, iArgentina , Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Mexico, Peru, Poland okanye Venezuela.
Ngamafutshane, iGeopois ngumbono onomdla kakhulu, odibanisa iimeko ezinokubakho zale meko ngokwemeko yokubonelela ngomxholo, ukusebenzisana kunye namathuba oshishino. Ngexesha elililo lokusingqongileyo kwendawo yonke imihla engaqinisekanga phantse kuyo yonke into esiyenzayo kubomi bethu bemihla ngemihla. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nale nkampani, unokufumana inqaku ngokwenza nqakraza apha
Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukumema ukuba ufunde olu hlelo lutsha, esilungiselele lona ngemvakalelo enkulu nothando, sigxininisa ukuba iTwingeo ikufumanayo ukufumana amanqaku anxulumene neGeoengineering kuhlelo lwakho olulandelayo, qhagamshelana nathi imeyile editor@geofumadas.com y edit@geoingenieria.com. Yintoni elindele ukukhuphela iTwingeo? Silandele LinkedIn uhlaziyo oluninzi.
I-TwinGEO 5th Edition-Imbono yeGeospatial
Iigxina ze-2019 Geospatial World Leadership ziye zaziswa kwaye ziya kuhanjiswa kwi-GWF